Sida loo soo celiyo kaadhka xusuusta si shil ah loo tirtiro - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>Sida loo soo celiyo kaadhka xusuusta si shil ah loo tirtiro
Sida loo soo celiyo kaadhka xusuusta si shil ah loo tirtiro
Soo kabashada xogta kaarka xusuusta
Inta lagu gudajiro isticmaalka caadiga ah ee kaararka xusuusta, waxaad inta badan la kulantaa dhibaatooyinka luminta xogta, sida tirtirka shilka, qaabka, iwm. Xogta kaarka xusuusta ayaa lumaysa. Ha ka welwelin, soo kabashada xogta maahan mid dhib badan .. Tafatiraha maanta ayaa soo bandhigaya seddex qaab oo si faahfaahsan looguna barayo sida looga soo kabto xogta ka luntay kaadhka xusuusta. Barbaarinta Kaadhka Kaadhka ee Kaadhka xusuusta 1: Sidee loo soo kaban karaa kaadhka xusuusta si shil ah loo tirtiray, faylal lumay? Sidee dib loogu soo ceshan karaa xogta?
Tababbarka kaarka xusuusta ee ka soo kabashada 3: Sideed uga soo kaban kartaa xogta kaarka xusuusta ee burburay? Soo dejiso
Casharrada lagu taliyay
Sababaha guud ee keenaya kaadhka xusuusta luminta
> Kaadhka xusuusta waa aalad aad loo adeegsado oo lagu keydiyo macluumaadka, kaas oo loo adeegsan doono taleefannada gacanta, kaamerooyinka dijitaalka ah, kumbuyuutarrada la qaadan karo, gawaarida gawaarida iyo alaabada kale ee dhijitaalka ah. Dhammaan noocyada xogta, sida sawirada, dukumiintiyada, fiidiyowyada, maqalka, barnaamijyada, iwm. Si kastaba ha noqotee, xogta ku saabsan kaarka xusuusta ayaa sidoo kale lumin doona sababao kala duwan.Hadaba ka fiirso Xiaobian. Maxay yihiin sababaha ugu badan ee xogta luminta kaarka xusuusta? Xuquuqda
tirtirka qaldama, qaabeynta: Haddii aad ku shaqeyneyso kaarka xusuusta kombiyuutarka ama sheygan dhijitaalka ah, waxaad si shil ah u tirtiri kartaa qaar ka mid ah macluumaadka ama aad u qaabayn kartaan kaarka xusuusta. Burburkii qayb ahaan: Burburkii qaybta waxaa inta badan ka dhasha hab aan caadi ahayn nidaamka faylka ee ka hor istaagaya furitaanka in la furo.Tusaale ahaan, markii kaarka xusuusta uusan dhammeynin wax aqrinta iyo qorista howlaha, kaarka waa laga saarayaa aaladda elektironigana lama xiri. Kaararka xusuusta, iwm. Waxay sababi karaan waxyeelo qayb kaararka xusuusta .. Xogta lama akhrin karo.
Fayras: Haddii kaarka xusuusta uu ku jiro fayras, xogta waxaa laga yaabaa in si xun loo tirtiro, la qariyo, ama loo qubo, taasoo keentay in Xogta si caadi ah looma adeegsan karo.
Sababo kale: qaybaha xun, xusuusta burburay, tayada liidata, iwm waxay sidoo kale sababi karaan arrimo luminta xogta. Mid ka mid ah: Sida loo soo celiyo kaadhka xusuusta si shil ah loo tirtiro oo loo habeeyo Badiyay files?
tutorial waxaa loogu talagalay in ay dib on kaadhka xusuusta aad u hesho sabab u tirtirka shil ama data format laga badiyay.
PreHal furaha dib u soo celinta xogta disk qaybsiga disk adag
NextKaadhka xusuusta ayaa tirtiray xog soo kabashada